नेपालमा भयाबह बन्दै कोरोना : प्रत्येक एक घण्टामा १२ जना संक्रमित – Online Nepal
नेपालमा भयाबह बन्दै कोरोना : प्रत्येक एक घण्टामा १२ जना संक्रमित
काठमाडौं । प्रत्येक एक घण्टामा १२ जना नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित थपिने गरेका छन् । पछिल्लो एक साताको अवधिमा थप २ हजार १ सय जना संक्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो एक सातालाई आधार मान्दा प्रत्येक घण्टामा १२ जनाको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिएको देखिन्छ ।
कुल संक्रमितमध्ये ९ सय १३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जसअन्तर्गत पुरुष ८ सय २२ र महिला ९१ जना छन् । हालसम्म संक्रमितमध्ये १८ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा. जागेश्वर गौतमले बताए । यसैगरी, नेपालमा निधन भएका थप दुई जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा वीरगन्जमा २८ जेठ र ३० निधन भएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले उनीहरूको वीरगन्ज प्रयोगशाला गरिएको पीसीआर परीक्षणमा शनिबार बिहान रिर्पोटमा कोरोना पोजिटिभ आएको जानकारी दिए । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १८ पुगेको छ । प्रशान्त वलीले राजधानी दैनिकमा यो खबर लेखेका छन् ।
Prevकोरना भाइसरसंग लड्ने औसधि नेपालमा सित्तैमा बाँडीदै !
Nextपहिरोले पुरिएर श्रीमान, श्रीमती र नातिको नि*धन, अन्य छ बेपत्ता
मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग २४ वर्ष अघि खिचेको तस्विर इस्टामा पोष्ट गर्दै गायक रामकृष्णले लेखे स्टाटस
सरिता गिरीको पु त्ला ज लायपछी पुण्य गौतम ,नरनाथ र बाबुराम किरिया गर्दै (हेर्नुहोस भिडियो)